Uyazi yini ukuthi isibikezelo sakamuva sesikhundla se-Economist Intelligence Unit somnotho omkhulu emhlabeni sishintshe kakhulu ngaphansi kwethonya lezinto eziningi ezifana nobhubhane lwe-COVID-19. Bheka ngomusa izindaba ze-CFM namuhla. | UJesson
Uyazi yini ukuthi isibikezelo sakamuva sesikhundla se-Economist Intelligence Unit somnotho omkhulu emhlabeni sishintshe kakhulu ngaphansi kwethonya lezinto eziningi ezifana nobhubhane lwe-COVID-19. Bheka ngomusa izindaba ze-CFM namuhla.
1. I-China ihlinzeke ngosizo lokugoma emazweni asathuthuka angama-53 futhi ithumele emazweni angaphandle futhi ithumela imithi yokugoma emazweni angama-22. Ngemuva kokulethwa kokuqala komuthi wokugoma i-COVID-19 ePakistan, umuthi wokugoma we-COVID-19 osizwe yiChina eCambodia naseLaos usufikile kula mazwe womabili. I-China izophinde ihambise imigomo eminingi kwamanye amazwe ngokulandelana.
2. UMnyango Wezempilo Nezabasebenzi waseJapan: ngonyaka wezi-2020, inani labazalwa eJapan lehle ngo-2.9% kusukela esikhathini esifanayo ngonyaka odlule laya ku-872700, okuyirekhodi eliphansi eliyiminyaka emihlanu ilandelana; isibalo sabantu abashonile besiyizigidi eziyi-1.3845, kwehle ngo-0.7% kusukela onyakeni owedlule okokuqala ngqa eminyakeni eyi-11.
3. Ngemuva kweholide loMkhosi Wentwasahlobo, amanani entengo yokudla eSouth Korea angenise umzuliswano omusha wokukhuphuka nxazonke. Intengo yemifino inyuke kakhulu, lapho intengo ka-anyanisi oluhlaza iphindwe kabili kusuka esikhathini esifanayo ngonyaka odlule, intengo yamatamatisi no-anyanisi inyuke ngaphezu kuka-80%, kanti intengo yelayisi nayo inyuke cishe ngo-20% uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngonyaka odlule. Uhulumeni waseNingizimu Korea uthe uzokhipha amanye amathani ayizi-60,000 ezinqolobane zerayisi emakethe kungekudala, futhi asekele ngenkuthalo abalimi bemifino yasekhaya ukuze bandise umkhiqizo wezitshalo; ngasikhathi sinye, kuya ngokunyuka kwamanani okusanhlamvu, ukunciphisa amanani entengo yokungenisa kwezinye izitshalo; ngokusebenzisa izinhlelo zokuphendula eziguquguqukayo ukukhulisa ukuzinza kwentengo.
4. Uphiko Lwezobunhloli lwe-Economist selukhiphe isibikezelo salo sakamuva mayelana nokukleliswa komnotho omkhulu emhlabeni. Uma kuqhathaniswa nonyaka we-2019, ukukleliswa kwamazwe amane aphezulu emnothweni akuzange kushintshe ngo-2021, kwalandelwa yi-United States, China, Japan ne-Germany; owesihlanu nowesithupha, i-India kanye ne-United Kingdom babuyele emuva amazinga; ngaphezu kwalokho, iBrazil iphume kwabangu-10 abahamba phambili. ISouth Korea iphinde yaba kwabangu-10 nabesishiyagalolunye.
5. INew York City inqume isikhathi esiqondile sokuthi amabhayisikobho aqale kabusha okokuqala ngqa selokhu kwaqubuka i-coronal pneumonia. Onke ama-cinema azovulwa kabusha ngoMashi 5 ekuqaleni. Ukuvimbela ubhadane, wonke ama-cinema aseNew York City, njengezinye izindawo ezivele zivulekile zebhayisikobho eNew York State, azovumela kuphela abantu abangama-25% ukuba khona, futhi akukho bantu abangaphezu kwama-50 abazovunyelwa ehholo ngalinye elikhulu lokuhlola leli bhayisikobho.
6. Ukuqubuka komkhuhlane wezinyoni eYurophu sekuholele ekukhuphukeni kwamanani amaqanda emazweni amaningi aseYurophu. IPoland, umkhiqizi wezinkukhu omkhulu kunayo yonke e-EU kanye nomkhiqizi wamaqanda wesithupha ngobukhulu, usehlanganise izinkukhu ezibalelwa ezigidini ezinhlanu, kubandakanya nenqwaba yezikhukhukazi ezizalela. Amanani entengo amaqanda ePoland akhuphuke ngo-18% aya ku-20% ekupheleni kukaJanuwari. Ngaphezu kwalokho, amanani entengo amaqanda eFrance, eJalimane nakwamanye amazwe angamalungu e-EU nawo akhuphuke aya ngamazinga ahlukahlukene.
7. [I-US Securities Regulatory Commission] eqala ngoFebhuwari 25, 2021, imali ekhokhwa yi-US Securities Regulatory Commission (ekhokhiselwa ukuthengisa ama-oda kuphela) izokwehliswa isuke ku-0.00221% iye ku-0.00051%.
8. Isibikezelo sakamuva sesikhundla se-Economist Intelligence Unit seminotho emikhulu emhlabeni sishintshe kakhulu ngaphansi kwethonya lezinto eziningi ezifana nobhubhane lwe-COVID-19. Uma kuqhathaniswa nonyaka we-2019, ukukleliswa kwamazwe amane ahamba phambili kwezomnotho kuhlala kungashintshi ngo-2021, kwalandelwa i-United States, China, Japan ne-Germany, ngenkathi i-India iphuma kwabahlanu abahamba phambili yadlulwa yi-UK. Ngokwendlela okwenzeka ngayo njengamanje, umnotho waseNdiya uzophinda futhi udlule owase-UK, okungenani kuze kube ngu-2026. I-India ingumnotho omkhulu ohlaselwe kakhulu yilesi sifo, kanti abantu abangafika ezigidini ezingama-200 kungenzeka babuyele ebuphofini.
I-Japan Institute of Real Estate Economics: ngo-2020, inani lentengo elijwayelekile lamafulethi asanda kwakhiwa eJapan lenyuke ngo-3.8% unyaka nonyaka laya kuma-yen ayizigidi ezingama-49.71, lifinyelela phezulu iminyaka emine ilandelana. Zithintwe yilo bhubhane, izinkampani ezidayisa izindlu zaseJapan ziyeke ukuthengisa ngesikhathi sesimo esiphuthumayo, ngakho-ke inani lokuthengiswa kwamafulethi amasha eJapane lehle ngo-15.2% unyaka nonyaka laya kumayunithi angama-59900 ngo-2020, okuyisibalo esiphansi kakhulu kusukela ngo-1976. yokwenyuka kwamanani omhlaba nezindleko ezikhulayo zabasebenzi kusekele amanani aphezulu ezindlu.